Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandehandeha tao amin'ny FITUR ny fizahantany Sierra Leone mba hisarihana mpitsidika Espaniola
Miaraka amin'ireo morontsiraka feno felatanana, tendrombohitra mahatalanjona, ala tropikaly ary kolontsaina mamirapiratra, i Sierra Leone dia iray amin'ireo tanjona manintona indrindra any Afrika Andrefana. Sierra Leone dia eo amin'ny paikady fidirana miditra ho an'ny tsena fitsangatsanganana sy fizahantany Espaniola. Noho izany, Sierra Leone, tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny FITUR izay mampiroborobo ity toerana aleha any Afrika Andrefana ity.
Nanomboka tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny dimy andro, ny minisitry ny fizahan-tany any Sierra Leone Victoria-Saidu Kamara sy ny ekipany dia nifamindra fivoriana mba hananganana tambajotra azo tanterahina miaraka amin'ny minisitry ny fanjakana manan-danja hafa, mpandraharaha mpizahatany, fiaramanidina, mpampiasa vola izay nanome ny tena hevitr'izy ireo fa i Sierra Leone dia ho avy matanjaka amin'ny toerana vaovao.
Nahasarika mpitsidika espaniola marobe ny fijoroan'i Sierra Leone
Frank Kohomme mpitsangatsangana sy mpandraharaha espaniola dia manazava ny toetran'i Sierra Leone tamin'ny taona 1980 fony izy nanao ny volan-tanterany tao amoron-dranomasina Tokeh.
Ity no fisehoan'i Sierra Leone voalohany eo amin'ny tsena Espaniôla.
Ny anarana Sierra Leone dia nanomboka tamin'ny 1462 raha nahita ny tendrombohitra peninsular ny mpikaroka portogey Pedro da Cintra rehefa nita ny moron'ny Afrika Andrefana izy. Ny sasany milaza fa nomeny azy ireo hoe 'Sierra Lyoa' (Tendrombohitra Lion amin'ny teny Portiogey) satria toy ny liona ny fierona ny kotrokorana, ny sasany kosa milaza fa noho ny endrik'izy ireo, izay mitovy amin'ny liona miondrika. Na izany na tsy izany, nikatona ilay anarana. Ny tantsambo anglisy dia nanova ny anarana hoe Serraliona avy eo ary lasa Sierra Leone.
Talohan'io, ny foko avy any afrika afrika dia nanorim-ponenana tao anaty ala virijina, izay hiarovan'ny tendrombohitra azy ireo ary ny ranomasina amin'ny lafiny iray. Izy ireo angamba no razamben'ny Limbas, foko tranainy indrindra any Sierra Leone, Bullom amoron-tsiraka (Sherbro), Temne, ireo olona miteny Mande ao anatin'izany i Vai, Loko ary Mende.
Taorian'ny nahitan'i Pedro da Cintra, nitombo ny fitaomana vahiny tao amin'ny faritra ary nanomboka ny varotra teo amin'ny mponina sy ny eropeana tamin'ny endrika rafitra mpivarotra. Nanomboka liana tamin'ny Sierra Leone ny anglisy ary tamin'ny 1672 dia nanangana fiarovana mimanda any amin'ny Nosy Bunce sy York ny Royal African Company. Tamin'ny fisian'ny varotra andevo, ny fanondranana olona no lasa entana lehibe ary amidy andevo ny indigene. Nanjary toerana voalohany amin'ny fitaterana andevo tany Eropa sy Amerika ny Nosy Bunce.
Tamin'ny alàlan'ny ezaky ny mpanao asa soa dia nanafoana ny fanandevozana i Grande-Bretagne ary natsangana ny tobin'ny tafika an-dranomasina any Freetown hanakanana ireo sambo andevo. Freetown dia lasa toeram-ponenan'ireo andevo nafahana tamin'ny 1787 ary nantsoina hoe 'Faritan'ny fahalalahana.' Tamin'ny taona 1792, andevo 1,200 1800 nafahana avy any Nova Scotia ary maro an'isa avy any Maroon tamin'ny taona 1808 no nanatevin-daharana ireo mpifindra monina tany Angletera. Tamin'ny taona 1896, ny faritry Freetown dia lasa zanatany satro-boninahitra britanika ary nanomboka ny varotra teo amin'ny indigenes sy ny mpifindra monina. Izany dia nanamboatra ny vavahady ho an'ny Anglisy hanitatra ny fanapahany ho any amin'ireo faritany ivelany ary tamin'ny XNUMX, dia nambara fa mpiaro iray.
Nandritra ny fanjanahantany anglisy, i Sierra Leone dia toeran'ny Governemanta ho an'ireo zanatany britanika hafa manamorona ny morontsiraka andrefan'i Afrika. Fourah Bay College dia naorina tamin'ny 1827 ary izy no oniversite voalohany ho an'ny fampianarana ambony atsimon'i Sahara. Nirohotra tany ny afrikanina miteny anglisy ary nalaky nahazo an'i Sierra Leone ny lohateny hoe 'Athens of West Africa' noho ny zava-bitany teo amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny lalàna ary ny fanabeazana.
Nandritra ny tantaran'ny fanjanahantany azy ireo, nikomy tamin'ny fitondrana britanika ny Sierra Leoneans ary nahazo fahaleovan-tena tamim-pilaminana tamin'ny 27 aprily 1961. Teo ambany fitarihan'ny praiminisitra voalohany, Sir Milton Margai, dia nanangana rafitra governemanta parlemantera ilay firenena vao nahaleo tena. lasa Repoblika tamin'ny 1971. Tamin'ny 1991 dia nipoaka ny ady an-trano ary niditra tao amin'ny folo taona maizina indrindra i Sierra Leone tamin'ny tantarany farany. Naverina tamin'ny laoniny ny fandriam-pahalemana tamin'ny 2002 ary, nanomboka teo, namony ny firenena. Sierra Leone dia eo amin'ny làlana haingana mankany amin'ny fampandrosoana eo ambanin'ny demaokrasia ataon'ny antoko maro ary ekena ho firenena iray azo antoka indrindra ao Afrika Andrefana.